Golaha Wasiirrada Kenya Oo La Sheegay Inay Ka Doodayaan Aqoonsi La Siiyo Somaliland – somalilandtoday.com
Golaha Wasiirrada Kenya Oo La Sheegay Inay Ka Doodayaan Aqoonsi La Siiyo Somaliland
Dablay Hubaysan Oo 15 Qof Ku Dilay Galbeedka Itoobiya
“Farmaajo Waxa Aan Leeyahay Ha Tilmaamin Midnimo Waadigii Taababka U Jaraye…” Madaxweyne Biixi Oo Si Kulul Ugu Jawaabay FARMAAJO
Madaxweyne Biixi Isu Diiwaangeliyey Kaadhka Ka qaybgalka Shirweynaha Xisbiga KULMIYE
Golaha Wakiillada Oo Ansixiyay Xeerka Doorashooyinka Somaliland Oo Ay Ka Saareen Kootadii Haweenka Iyo Beelaha La Hayb-sooco.
(SLT-Nairobi)-Warar ka imanaya Magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa sheegaya in Xukuumadda dalkaasi ee uu hoggaamiye Madaxweyne Uhurru Kenyatta ay ku doodayso Aqoonsi la siiyo Somaliland.
Shabakadda Wararka ee Garoowe Online oo soo xiganaysa Masuul sare oo aanay Magaciisa sheegin ayaa ku warrantay in Golaha Xukuumadda ee Kenya uu hor-yaallo Mooshin ku saabsan sidii Somaliland loo siin lahaa Aqoonsi buuxa.
Mooshinkan ayaa waxa Golaha Wasiirrada u soo gudbiyey Wasiirro ka mid ka mid ah Dawladda Kenya iyo Xubno kale oo muhiim ah.
Fadhigii koowaad ee arrintan lagaga dooday ayaa ayaa guddoominayey Madaxweynaha Kenya Mudane Kenyatta, sida laga soo xigtay Masuulka aan Magaciisa la shaacin.
Warku wuxuu intaa ku darayaa in arrintan oo socotay illaa bishii July ee dhamaatay ay Golaha Wasiirradu saareen guddi Qodaxda ka gura Mooshinka isla-markaana daraaseeya, xilligana la sugayo Talo-bixinta Wasaaradda arrimaha dibedda ee Kenya “Golahayaga Wasiirradu waxay ka wada-hadlayaan suurto-galnimada in aqoonsi la siiyo Somaliland, doodduna way sii soconaysaa.” Ayuu yidhi, Masuulkan sare ee aan Magaciisa la sheegin, waxaanu intaa ku daray in hawshu soconayso ka dib marka ay arkayaan Talo-bixinta khuburrada Wasaaradda Arrimaha dibedda.
Ilo-wareedkani waxa kale oo uu intaa sii raaciyey in Toddobaadyada soo socda oo ay Doodda Arrintani sii jiri doonto ay suurto-gal tahay in Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi iyo Wefti uu hoggaaminayaa ay tagaan Magaalada Nairobi, safarkaasi oo la xidhiidha arrintan.
Lama hubo in Madaxweynaha uu muddada uu Nairobi ku sugan yahay la kulmi doono dhiggiisa Kenya, Uhurru Kenyatta.
Warkan ayaa ku soo beegmaya xilli Somaliland ay bilihii u horreeyay ee sannadkan ay Qaaradaha Afrika iyo Aasiya ka bilowday dedaallo diblumaasiyadeed oo ay ku iib-geynayso Qaddiyaddeeda Ictiraaf-raadineed.
By Wariye September 27, 2020
(SLT-Addis Ababa)-Dablay hubaysan ayaa 15 qof ku dilay galbeedka dalka Ethiopia, sida ay sheegtay Komishanka Xuquuqda...
(SLT-Hargeysa)-Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland, ahna guddoomiyaha xisbiga KULMIYE, Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaa maanta xarunta guud ee...
(SLT-Hargeysa)-Golaha Wakiillada Somaliland ayaa maanta Ansixiyay Xeerka Doorashooyinka Somaliland balse waxa ay xeerka ka saareen Qoondadii...
Booliska Somaliland Raali-gelinsiiyay Canacsade Reer Boorama Ah Oo Xalay La Weeraray
Dooni Ay La Socdeen Muhaajiriin Soomaali Ah Oo Ku Degtay Xeebaha Liibiya
(SLT-Liibiya)-Illaa 22 muhaajiriin ah oo ay ku jiraan Soomaali ayaa ku guulleystey inay badbaadaan markii doon...
By WariyeSeptember 27, 2020